यी लेखकको चिहानलाई महिलाले गर्छन् किस, यस्तो छ कारण
HOME » यी लेखकको चिहानलाई महिलाले गर्छन् किस, यस्तो छ कारण
डिसी नेपाल , २६ श्रावण २०७४
पेरिस। फ्रान्सको पेरिसमा एउटा चिहान छ जहाँ लपक्कै लिपस्टिकको छाप छ । यो चिहानलाई त्यहाँ आउने सबै महिलाले किस गर्छन् । १९ औं शताब्दीका लेखक तथा कवि ओस्कर वाइल्डको यो चिहानलाई उनको एक कवितामा वर्णन गरिएको शैलीमा डिजाइन गरिएको छ । जसका कारण महिलाहरुले यसलाई नचुमी छोड्नै नसक्ने भएको बताइएको छ ।
यहाँ नजिकैका मानिसहरुको अनुसार १९९०को अन्त्यमा यो चिहानलाई महिलाहरुले चुम्ने सिलसिला सुरु भएको हो । यो किसले ओस्कारप्रति मानिसहरुको माया दर्शाउँछ । यहाँ आउने पर्यटक महिलाले चिहानलाई चुमेर त्यहाँ आफ्नो लिपस्टिकको छाप छोडेर जान्छन् । तर यो काम यति सजिलो छैन । यदि कसैले यहाँ किस गरिरहेको देख्यो भने झण्डै १२ लाख नेपाली रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर चिहानमा किस गर्नेहरु धेरैजसो पर्यटक हुन्छन् र उनीहरुलाई पक्राउ गर्नुभन्दा पहिल्यै उनीहरु आफ्नो देश पुगिसकेका हुन्छन् ।
सुरुसुरुमा यो चिहानबाट लिपस्टिकको निशान हटाउने प्रयास गरिएको थियो । तर जहिले पनि चिहानलाई सफा गरिन्थ्यो यसको एक पत्र उक्किन्थ्यो । यसो गर्दा चिहानको भित्तालाई असर परेपछि अहिले चिहानलाई सिसाले घेरिएको छ । तर, महिलाहरुले सिसामै लिपस्टिकको छाप छोड्न थालेका छन् ।
यी हुन् संसारकै सबैभन्दा ठूलो नितम्ब भएकी महिला
मात्र एक उसनेको अण्डा सुगरका लागि रामवाण ( भिडियो)
जागिरको खोजीमा अमिताभ बच्चन!
धादिङ दुर्घटनाको दर्दनाक दृश्य, ४ यात्रु घाइते ४ सय बढी कुखुराको मृत्यु (स्थलगत भिडियो)
बाहुबलीको अर्को संस्करण रिलिज, बाहुबली–२ ले नदिएका प्रश्नको जवाफ दिने
सबैभन्दा सफल सिरियल ‘कसौटी जिन्दगी की’ फेरि टेलिभिजनमा आउने
कसले भन्छ पैसा रुखमा फल्दैन ? यस्तो छ पैसा फल्ने रहस्यमय रुख
कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा–चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल भेटवार्ता
मुलुकका विभिन्न भागमा बम फेला, बन्दकाे प्रभाव सामान्य
दुई रियल लाइफ जोडिको भिडन्त अब एउटै चलचित्रमा
पहिलोपटक सन्दिपलाई भेट्दा आत्तिएका थिए कोच राजु खड्का, यस्तो थियो पहिलो भेट
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राष्ट्रियसभामा तीन जना सदस्य नियुक्त
बिबेक र बेनिशाको पहिलो प्रेम र बिछोड कसरी ?
क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेशकै नमूना बनाइनेः मुख्यमन्त्री शाही
हराएको ब्याट्री गाडिएको आशंकामा खेत खन्दै गर्दा युवतीको लाश निस्किएपछि...
शत्रुगतेको पोस्टर फोटोशुटमा हरिवंशले हँसाएपछि दिपाश्री मुर्छा परिन् (भिडियो)